Qalinjabiyeyaasha - Dugsiyada Dadweynaha ee Aagga Biyaha ee ISD 834
Dhaqan dheer oo lagu faano
Maaddaama aan nahay degmo dugsiyeedka ugu da'da weyn gobolka, waxaan leenahay taariikh dheer iyo dhibco aan la tirin karin oo lagu faani karo Pony. Laakiin ma jiraan wax naga dhigaya kuwo sharaf leh oo ka mid ah qalinjabiyeyaashayada cajiibka ah. Waxaan qalin jabinay jiilalkeena bulshada ugufiican uguna ifaya, waxayna kusii socdeen fulinta waxyaabo yaab leh
Fasalka 1971 • Kulankii 50aad
Jimco, Sebtember 24, 2021
Wadada Wadada Biyaha, Biyaha
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Fasalka 1971 • Kulankii 50aad
Fasalka 1961 • Kulankii 60aad
Sebtember 4, 2021
Park Pioneer, Stillwater
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Fasalka 1961 • Kulankii 60aad
Fasalka 1985 • Kulankii 35aad
Sabti, Juun 26, 2021
Brekke Park, Oak Park Heights
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Fasalka 1985 • Kulankii 35aad
Fasalka SHS ee 1970 Kulankii 50aad - Fasalka '70 ee 70 (da 'yar)
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan SHS Class of 1970 50th Reunion - Fasalka '70 ee 70 (da'da yar)
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Afar loo xushay 2021 Qalinjabiyeyaasha Kala Duwan
Dib u midoobida Fasalka
Dugsiyada Dadweynaha Stillwater Aagga ma qorsheynayaan dib u midoobid. Waxay ku xiran tahay shaqsi kasta oo ka qalin-jabinaya inuu abaabulo mid u gaar ah.
Haddii aad qorsheyneyso isu imaatin fasal, fadlan buuxi foomkan faahfaahinta waxaana ku dhejin doonnaa macluumaadka halkan boggayaga oo ay weheliyaan bogga Facebook ee SAHS Alumni.
Kala soco wixii ku soo kordha Qalinjabiyeyaasha wararka iyo dhacdooyinka!
Dib ula xiriir annaga!
Noo soo sheeg waxa aad soo waday tan iyo markii aad qalin jabisay.
Qalinjabiyeyaasha sharafta leh
Abaalmarinta Qalinjabiyeyaasha sharafta leh waxay aqoonsan tahay shakhsiyaadka mudnaanta sare siiyay waxbarashada iyo u adeegida dadka kale, iyaga oo noqday ku dayasho jiilkan iyo jiilalka soo socda. Dr. Jon Swenson, oo ah maamulaha Dugsiga Sare ee Stillwater, ayaa bilaabay abaalmarintan sanadkii 1987.
Guddi iyada oo loo marayo habka magacaabista ayaa dooranaya abaalmarinta dadka qaata mid kasta. Qalinjabiyeyaasha la doortay ee sharafta leh waxaa lagu sharfayaa soo dhaweyn ka hor qalin jabinta iyo xaflada bilowga.
Magacaabid Alumnus Fon u Qalma
Raadi Qalinjabiyeyaal Kala Duwan oo Lagu Tilmaamo Jidka Shaqada
Farshaxanka & Isgaarsiinta
Sayniska Caafimaadka & Adeegyada Aadanaha
STEM & Deegaanka
Sifee Sanadka Qalinjabinta
2019 Inductee, saynisyahan caan ah iyo cilmi baare aagga jawiga cimilada,.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Dr. David C. Fritts
2019 Inductee. Waqtiga ay haweenku ku xadidanaayeen fursadaha shaqo iyo horumarka, Lantz waxay heshay dariiq ay ugu adeegto dalkeeda uguna raaxaysato xirfad macno leh oo ku saabsan adeegga bulshada.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Marcella Christine (Schell) Lantz
Inductee 2019 Robert MacDonald III wuxuu in ka badan 40 sano ku qaatay inuu noqdo hogaamiyaha Shirkadda 3M.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Robert MacDonald III
2019 Inductee David Magnuson wuxuu naftiisa u hibeeyay u adeegida dadka degan magaalada Stillwater isagoo ah qareen sare oo aad loo ixtiraamo laguna kalsoon yahay.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan David Magnuson
Fasalka 1972, oo ah maamule suuqgeyn heer qaran ah, oo ka caawiyay in Minnesota la dhigo khariidadda laga bilaabo Cub Foods ilaa Mall of America ilaa Super Bowl LII.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Maureen (Hooley) Bausch
Fasalka 1979, waa hogaamiye bulsheed hormood ah oo u shaqeeya sidii qareen aad u qadarin badan oo lagu kalsoon yahay qorshaynta guryaha.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Tracey A. Galowitz
Fasalka 1976, oo ah hoggaamiye daryeel caafimaad oo u adeegaya Sarkaalka Kalkaaliyaha Caafimaadka ee Mayo Clinic iyo Guddoomiyaha Waaxda Kalkaalinta ee Rochester, Minnesota.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Pamela (Ogren) Johnson, MS, RN, NEA-BC, FAAN
David S. Ratte, Capt, USN (Dib.)
Fasalkii 1980, halyeeygii howlgabka ahaa ee Naval wuxuu dunida u soo safray isagoo ah sarkaalka gujis badda ku tababaran ee nukliyeerka, wuxuuna shaqeynayay 34 sano.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan David S. Ratte, Capt, USN (Ret.)
Aaway Qalinjabiyeyaashii Pony hadda?